Ngwa - Ndozi nkenke
Filtration nke mmanye mmanụ na ihe mgbakwunye mmanụ; mgbake mmanụ ala; nzacha nke mmiri amine na mmiri glycol; distillation na fractionation usoro; igwe nhicha mmiri amine; ọdụ nzacha ọdụ ụgbọ mmiri; mmanu mmanu na mmiri mmiri ntụtụ, wdg.
Ụlọ ọrụ ụgbọala
Mmiri na -asọ oyi, ịsa mmiri, eserese electrophoresis, akwa mkpuchi, varnish, primer, loop paint, wdg. akụkụ nhicha mmiri, onye na -ahụ maka ọgwụgwọ elu, mmanụ na -ete mmanụ, mmiri ịkpụcha ọla, nzacha mmiri na -egweri mmiri, ịre mmiri dị ọcha, wdg.
Iwepụ ntụpọ agba ọsọ ọsọ; ihe mgbaze nzacha; mwepụ nke adịghị ọcha e guzobere na nchekwa; nzacha n'ahịrị nkwakọ ngwaahịa na ahịrị agwakọta; ịdị ọcha monomer, wdg.
Iweghachite ihe arụ ọrụ dị oke ọnụ; mgbake nke ihe mkpali; nzacha nke gelatin, homonụ na ihe ndị dị ndụ; iwepụ protein na plasma; nzacha nke nnu; filtration decarbonization nke nnukwu infusions, injections mmiri, ndị na -ere ọgwụ, wdg, ofe gbaa ụka, mmiri ọnụ, mmiri ọgwụ, ọgwụ ọgwụ China, wdg.
Mmiri nzacha nke ọma; osisi ọgwụgwọ mmiri; mwepụ nsị; akwa-mgbali ihicha mmiri filtration; iwepụ unyi na ahịhịa mmiri dị n'oké osimiri; mgbake nke resin mgbanwe ion; iwepụ kristal calcium; nzacha kemịkal ọgwụgwọ mmiri; nzacha mmiri jụrụ oyi; ọgwụgwọ tupu nzacha akpụkpọ ahụ, wdg.
Chemical ụlọ ọrụ
Imegharị ọla ndị dị oké ọnụ ahịa na ihe mkpali; iwepu nha na ọkpọkọ mmiri; nzacha acid, lye, na ihe mgbaze; nzacha emulsions na mgbasa; na -enyocha colloids na resins; mwepụ nke carbon na -arụ ọrụ mgbe emebisịla na adsorption nke ihe ndị na -egbu egbu; mmepụta nke titanium dioxide; mmepụta nke PVC; Filtration nke flue gas desulfurization mmiri mmiri; nzacha plastik dị iche iche, mmanụ ọkụ na ihe ndị na -etinye mmanụ.
Ịrụ ọrụ igwe
Hydraulic mmanụ filtration; nhazi nhazi nhazi; mgbake igwe dị oke ọnụ ahịa; mmiri ịcha mmiri, nzacha mmiri na -atụgharị; nhicha mmiri nzacha, wdg
Nri na ihe ọverageụverageụ
Nnyocha mmiri ịnweta mmiri, biya, mmanya ọcha, mmanya osikapa, ihe ọ ,ụ ,ụ, ngwaahịa mmiri ara ehi, wdg; nkewa nke ndị na -achọ mma na carbon na -arụ ọrụ site na mmanụ oriri; nzacha n'oge mmepụta mmanya na soy sauce; nzacha nke sirop, ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi na mkpụrụ ọka; carbon doro anya na ntụ ntụ ntụ, ihe nnyapade na gelatin, wdg.